Inja ebabazekayo yaseTibetan Terrier | Izinja Zomhlaba
Uma uthanda izinja ezinosayizi ophakathi nezinwele eziningi zokuzifuya, i- Indawo yaseTibetan Kungaba umngane owufunayo, ngoba ngokungafani ne-Terriers esikujwayele ukuyibona, inomlingiswa ovamile futhi awudingi ukwenza ukuzivocavoca okuningi njengalabo.
Kuyinto enoboya - futhi akukaze kushiwo kangcono ukuthi ngubani uyakuthanda ukutotosa futhi ujabulele nezingane, okwenza kube inja engumngane omuhle kakhulu.
1 Umsuka nomlando weTibetan Terrier
3 Uzinakekela kanjani?
4 Ingabe iTibetan Terrier hypoallergenic?
5.1 Ungayithola imidlwane yaseTibetan Terrier njengezipho?
6 Izithombe zeTibetan Terrier
Umsuka nomlando weTibetan Terrier
Umjaho wethu oyinhloko uvela ezintabeni zaseTibet, lapho izindela zamkhulisa ezigodlweni njengezinja ezihamba naye nanjengomalusi. Ungenye yezinhlobo ezihlanzekile ezikhona njengamanje njengoba abantu bengazange bakhethe imidlwane njengoba benzile ngezinye izinhlobo, njenge Umalusi waseJalimane noma i I-Golden Retriever.
Ifike eYurophu isuka esandleni sikaDkt Angès Greig, owethula umbhangqwana wokuqala eGreat Britain. Lezi zinja ezimbili zokuqala ezafika e-Old Continent kwakuyisipho senkosazana yaseTibetan, futhi kuze kube manje abantu abakaze bashintshe noma yini yalolu hlobo, okungenani ngokomzimba.
Isizinda seTibetan Kuyinja encane ngokulingene enesisindo esiphakathi kuka-8 no-14kg. Ilinganisa phakathi kuka-36,5cm no-40,6cm ukuphakama. Umzimba wayo uqinile futhi uqinile, uvikelwe ngengubo ephindwe kabili yezinwele ezinde, eziqondile, ezinhle nezinoboya ezingaba umbala ngaphandle koshokholethi noma isibindi.
Izindlebe zayo ezinkulu zimise okwe- "V", zilenga futhi zimbozwe yimiphetho. Imilenze iqinile kakhulu, inezinyawo ezinkulu, eziyisicaba. Umsila ugobile ngemuva.
Inesikhathi sokuphila se- I-12 eminyakeni engu-15.
Ukuba yisidlakela esidla inyama kubalulekile ukuthi banikezwe okuphakelayo okungokwemvelo noma ukudla okunothe ngamaprotheni wemvelaphi yezilwane. Okusanhlamvu, kungaba ummbila, ukolweni, ubhontshisi, irayisi, noma okunye, kanye nofulawa owenziwe ngawo, kungadala ukungezwani kokudla.
I-Tibetan Terrier yokuba nezinwele ezinde idinga ukubhulashiwa nsuku zonke. Uma ungahlosile ukuyiyisa emibukisweni ungayihambisa kumlungisi wezinja ukuze isikwe. Futhi, kufanele umgeze kanye ngenyanga. Sebenzisa i-shampoo efanelekayo yezinja.
Amehlo nezindlebe nakho kudinga ukunakekelwa. Uma ubona ukuthi anokungcola (ama-lagañas, i-wax), uwahlanze ngemikhiqizo ethile, nange-gauze oyinyumba.
Kuyinja lokho kumele ngihambe nsuku zonke, cishe kathathu okungenani. Uma ungomunye walabo ngezikhathi ezithile abaya ensimini bezovakasha, unganqikazi ukuhamba nayo ukuze ukwazi ukujabulela imvelo nawe, nakho konke okukuyo, njengezinye izilwane nabantu, izitshalo, amaphunga ahlukile, njll.
Njenganoma iyiphi inja, ngezikhathi ezithile empilweni yakhe uzodinga usizo lwezilwane. Ngoba, njalo uma usola ukuthi uyagula kuzofanele umyise ukuyohlolwa nokwelashwa. Ngokufanayo, noboya kumele butholakale ukugoma, futhi i-microchip kufanele ifakwe.
Uma ungafuni ukuthi abe nemidlwane, kungakuhle kakhulu ukuthi umhambise ukuze ajeziswe.
Ingabe iTibetan Terrier hypoallergenic?
Abantu abaningi banenkinga yokungezwani komzimba nezinja, ngakho-ke imvamisa uma ufuna ukwabelana ngempilo yabo nesilwane, bakhetha olunye uhlobo oluhlukile. Lokhu kunengqondo ngokuphelele, ngoba kungokwemvelo ukugwema ukuba nezinkinga. Kepha uma ufuna inja yebo noma yebo, ungaphumula kalula ngoba iTiber Terrier yi-hypoallergenic.
Njengazo zonke izinja, ngesikhathi sokuchitha izolahlekelwa yizinwele, kepha inani elichithwa yilolu hlobo lincane kakhulu kunalelo shevu, ngokwesibonelo, yi-Yorkshire terrier. Uma sengeza kulokho nge-Furminator ungasusa ngisho nangaphezulu ngephasi elilodwa, ngaphandle kokungabaza ukuthi siyinwele evumayo yabantu abanohlobo oluthile lokungezwani nezinja.
Ngabe usuthathe isinqumo sokuthi uzonikeza uthando nokunakekela iTiber Terrier? Uma kunjalo, manje usungathenga konke okudingayo: umbhede, amathoyizi, ukudla, okondlayo, ...
Futhi yisikhathi esihle sokuxhumana nabalimi, futhi ubabuze ukuthi ibiza malini umdlwane waseTibetan Terrier. Ngakho-ke, uzokwazi ukuthi intengo iseduze I-800 euro.
Ungayithola imidlwane yaseTibetan Terrier njengezipho?
ITibetan Terrier iyinja enhle kakhulu, enothando futhi ejwayele ukuthi, uma nje inakekelwa kahle, iyoba inja ethandekayo. Kepha ngokuba luhlobo olumsulwa, kunzima ukuthola imidlwane mahhala. Ungahle ukwazi ukuthola inja endala yokuyikhulisa, kepha kusenzima.
Ngakho-ke, uma kwenzeka ukuthi uhlobo alunandaba kakhulu kuwe, sincoma ukuthi ufune iziphambano. Ngaphandle kwalokho, okuwukuphela kwendlela ukuxhumana nabafuyi.
Izithombe zeTibetan Terrier
Siqeda ngokunamathisela ezinye izithombe ezimbalwa:
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » Inja enhle kakhulu yaseTibetan Terrier
Ungangitshela ukuthi ngingathenga kuphi i-tibet terrier eshibhile? Ngiyabonga
UBerger Picard, inja yezimvu ethanda ukuzijabulisa